Gudoomiyaha jaaliyada Galmudug Ee Sweden oo loo doortay Cali Salaad Axmad Cali – Kismaayo24 News Agency
Gudoomiyaha jaaliyada Galmudug Ee Sweden oo loo doortay Cali Salaad Axmad Cali
by admin 13th March 2016 045
Jaaliyadda Soomaliyed ee ka soo jeeda Deegaanada Galmudug ayaa doortay Gudoomiye cusub oo ay yeeshan Jaaliyada Galmudug ee Dalka Sweden waxaana loo doortay in uu gudoomiye noqodo Shaqsi lagu Magacaabo Cali Salaad Axmad cali.
Xilka Gudoomiye ee Jaaliyada Galmudug waxaa isku soo sharaxay laba Musharax oo kala ah Cali Salaax Axmad cali iyo Maxamad Axamd Cod Bixin dheer ka dib waxaa si rasmi ah loogu doortay in uu hogaamiyo jaaliyadda Soomaliyed ee Dalka Sweden Mudane Cali Salaad Axmad Cali.
Guud ahaan Waxa Cod Bixinta Doorashada ka qeyb galay 18 Xubnood waxaana goobta doorashada xaadir ku ahaa 17 Xubnood halka Cod Bixiye kalana uu maqane ka ahaa goobta Cod Bixinta Codadkii la dhiibtay 16 kamid ah waxa ay ugu shubeen Cali Salaad Axmad Cali halka Cod Bixyaha kale uu Codkiisa ugu shubay Maxamad Axmad sidaasna waxaa guusha ay ku Raacday in uu Gudoomiye u Noqdo Jaaliyada Soomaliyeed ee ka soo Jeeda Galmudug ee ku Nool Dalka Sweden Mudane Cali Salaad Axmad Cali.
XOG: Maxaa saacadan la joogo ka cusub shirkii Kismaayo Beesha Sade uga socdey???
War Hada: Waalidiin Soomaliyeed oo lagu xiray koonfurta magaalada London ee dalka UK kadib markii ay soo baxeen tuhuno la xiriiro in mid kamid ah Caruurtooda ay u wadeen meel ka baxsan dalka Ingiriiska.
Daawo: Qaabka ay u dhacday ansixinta golaha wasiiradda iyo sida loo dhaariyay wasiiradda cusub
TOP NEWS: Dhageyso: Dadki dhawaan ku soo dhaawacmay Qaraxii ka dhacay Masjid Beledweyne ku yaalo iyo Dhaqaatiirta Daaweyneysay oo Arin yaab badan ay kala qabsatay
Top News: Maxaadan Ogeyn Oo Maantey Ka Jira Turkey-ga!!!